धरहराबाट खसेकी रमिला : मैले जस्तै यसले पुनःजीवन पायो, यहीँ रोजगारी पाऊँ (भिडियो सहित):: Mero Desh
धरहराबाट खसेकी रमिला : मैले जस्तै यसले पुनःजीवन पायो, यहीँ रोजगारी पाऊँ (भिडियो सहित)
काठमाडौं : ‘रमिला श्रेष्ठले दुवै हा’तले मुख छो’प्दै भनिन् । उनका आँ’खाहरु नवनिर्मित धरहराको टुप्पोतिर सोझि ‘एका थिए । सुन्धारा क्षेत्रमा आज अरु दिनभन्दा बाक्लो थियो मानिसहरूको चहल पहल । मोटरसाइकलमा हु’इ किँदै आउनेहरू ट’क्क अ’डिन्थे र खल्तीबाट मोबाइल निकाल्थे । अनि, मुस्कुराउँदै धरहरालाई पृष्ठभूमिमा राखेर तस्वीर/सेल्फी खिच्न था’ल्थे । पैदल यात्री पनि एक-दुई स्न्याप हानेर मात्रै अघि बढ्थे ।’
‘केही दिनदेखि धरह’राका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइसकेका छन् । भूकम्पले भत्केको ऐतिहासिक संर’चनाको सफलतापूर्वक पुनर्निमाण गरेकोमा सरकारले जनताबाट धन्यवाद खाइरहेको छ । कसैले चाहिँ धरहरा बनाउने पैसाले ‘यतिवटा अस्पताल बन्थे’ भनेर हिसाब पनि निकालिरहेका छन् ।’
‘यता, रमिलाको मनमा चाहिँ अर्कै ह’लचल छ । उनको मानसपटलमा अहिले घुमिरहेका छन् आजभन्दा ६ वर्ष अगाडिका प’रिदृ’ष्यहरू । २०७२ सालको वैशाख १२ गते पनि उनी यहाँ आएकी थइन् । धरहरा चढेकी थिइन् । माथि पुगेर उल्लासित बन्दै चि’च्याएकी थिइन् । त्य’सपछि भने के-के भयो न उनी सम्झिन स’क्छिन्, न सम्झिन चाहन्छिन् ।
‘हो, भूकम्पले देश हल्लाएको क्षण रमिला धरहराको टु’प्पोमा थिइन् । धरहरा ढलेसँगै उनी भू’इमा बजारिए की थिइन् । तर, बाँचेकी थिइन् ।’
‘भूकम्पले भत्केको धरहराको ठूटो अहिले पनि त्यही अव स्थामा छ । त्यो ठूटोलाई चिनोका रुपमा यत्तिकै छोपछाप पारेर अर्को धरहराको नव’निर्माण भएको छ । न’वनिर्मित धरहराको उ’द्घाटन हुने अघिल्लो दिन रमिला यहाँ आएकी छन् ।’
‘नयाँ धरहरा देख्दा कस्तो लाग्यो उनलाई ?’खुशी लाग्या छ,’ आँ’खाको कालो चश्मालाई टाउकोमा ध’केल्दै भनिन्, ‘तर, कस्तो ड’र पनि ला`गिरा’ख्या छ ।’ तपाईंले त धरह राबाट ख`सेर पु’नःजीवन पाउनुभएको है !
‘उनी थोरै मु’स्कुराइन् र सहमतिमा मुन्टो ह’ल्लाइन् । अनि धराहरातर्फ औं’ल्याउँदै भनिन्, ‘मैले मात्र हैन, ऊ त्यसले पनि पुनःजीवन पायो।’धरहराबाट खसेपछि चोटग्रस्त भए को रमिला को खुट्टा पनि भर्खरै ठीक भएको छ । एक वर्ष अगाडि उनले खुट्टामा राखिएको स्टिल झिकेकी थिइन् ।’म पनि उभिएँ, धरहरा पनि उभियो,’ उनले गर्वको भावमा भनिन् ।’
‘मानौं प्रश्नले नै रमिलालाई अत्यायो ।नाइँ-नाइँ नचढ्ने ! डर लाग्छ मलाई उनी साँ’च्चिकै न’र्भस् देखिइन् ।त्यसदिन साथी सञ्जीव श्रेष्ठसँग रमिला सुन्धारा घुम्न नि’स्किएकी थिइन् । एकोहोरो हिँडिरहेका उनीहरूले अगाडि धराहरा देखे । ‘सञ्जिबले भने- चढ्ने हो ? रमिलाले सहमति जनाइन् ।’
‘दुवै उ’त्साहसाथ धरा’हरातर्फ लागे । टिकट काटे । अनि, रमिला साथीको अघिअघि सिँढी उक्लिइन् । माथि रेलिङ मा पुगेर काठमाडौं नियाल्दै रमाए उनीहरू । तर केहीबेरमै अ’चानक धरहरा ह’ल्लिन थाल्यो । उनीहरुले केही मेसो पाउन नसक्दै धरहरा ग’ल्र्या’म्गुर्लुम् भयो ।
‘९ तले धरहराबाट उछिट्टिएर उनीहरु तल भूइँमा बजारिए का थिए । रमिला बेहोश थिइन् ।’‘हो’स आउँदा त म ह’स्पि टलमा थिएँ । अरुको फोन मागेर घरमा ख’बर गरेकी थिएँ । होस जाने आउने भइरहेको थियो,’ रमिला सुनाउँछिन् ।’ उनको गोडा भाँ`चिएको थियो भने उनका साथी को हात । त्यही गोडा ठीक हुन निकै समय ला’ग्यो रमिलाको । टाउको र अनुहारका भागमा पनि चो’ट लागेका थिए ।’
‘एक महिना अस्पताल बसिन् रमिला। अस्पताल बस्दा पनि प’राकम्पनहरू आइरहन्थे । उनको सातो जान्थ्यो । ज्या`न बाँच्दाको खुसी त थियो नै । पटक-पटक प’राकम्प आउँदा अब बाँचिन्न कि भनेझैं भइरहन्थ्यो ।’अस्पतालमा पहिलोपटक गोडाको शल्यक्रिया बिग्रियो । जसले गर्दा उनले थप दुःख झेलिन् । पछि गोडामा स्टि’ल राखिएको थियो । झण्डै डेढ वर्ष त वैशाखी टेकेर हिँडिन् ।’
‘स्टि’ल निकालेको एक वर्ष भयो । तर, पूरा निको भएको छैन । बेला-बेला दु`खिर’हन्छ,’ उनी सुनाउँछिन् ।’घरको आर्थिक अवस्था बलियो थिएन । सुरुमा सरकारले उपचार गरे पनि सबै खर्च आफैंले व्य’हो’र्नुपर्यो । बुवाले ऋ’ण-धन गरेर उनको उ’पचार गराए ।
‘धराहराबाटै ख’सेका एक जनासँग उनको पछि भेट भयो । त्यो भेटले उनको मन नराम्ररी ह’ता’सियो । ‘उहाँ’को त खु’ट्टा नै का`टेको रहेछ । त्यो देख्दा आफूलाई भाग्यमानी सम्झिएँ,’ उनले भनिन् । भूकम्प जाँदा रमिला कक्षा ९ मा पढ्थिन् । घा`इते शरीरका का’रण एक वर्ष पढाइ छुट्यो । अहिले उनले प्लस टुको परीक्षा सिध्याएकी छन् । ब्याचलर पढ्ने तयारीमा छिन् ।’
‘हरेक वर्ष जब वैशाख १२ आउँछ, त्यतिबेला मिडियामा रमिलाको खोजी हुन्छ । बाँकी अरु दिन कसैले सम्झिँदैन । यसमा रमिलाको ठूलो गु’ना’सो छ ।मलाई अब अ’न्तर्वार्ता दिन पनि मन लाग्दैन । जति अन्त ‘रवार्ता दिए पनि कसैले केही गरेको होइन । न उ”पचार खर्च पाएँ, न रोजगारी । मिडियाले पनि हाम्रो दु:ख देखाएर भ्यू’ज कमाउँछन्, तर स’हयोग गर्दैनन्,’ रमिलाले हामीलाई नै झटारो हानिन् ।’
‘उनलाई यतिबेला रो’जगारी चाहिएको छ । बुवाको सामा -न्य खेतिकिसानीले परिवारको भ’रणपो’षण गाह्रो हुँदै गएको उनले बुझेकी छन् । भाइ सानै छ । त्यसैले आफैंले कमाएर परिवार लाई सहारा दिन चाहिन्छन् । सँग”सँगै पढाइलाई पनि निरन्तरता दिनु छ ।’
‘घरमा बा आमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू उकालो- ओरालो गर्न सक्नुहुन्न । शरीर कमजोर भएको छ । अब त मैले पनि केही गर्न पाए हुने,’ उनी मलिन सुनिइन् ।’ रमिलाले हामी सँग आफ्नो एउटा इच्छा सुनाइन् धरहरामा यत्रो काम भइर हेको छ, मलाई पनि सरकारले यहीँ रोज गारी मिलाइदिए हुन्थ्यो’ उनले भनिन्, ‘लौन, तपाईंहरुले पनि भनिदिनु ।’
‘जुन धरहराबाट खसेर पनि उनको ज्या`न बाँ’च्यो, त्यही धरहरामा रोजगारी गर्ने रमिलाको इच्छा अ’र्थपूर्ण थियो । के उनलाई यहाँ काम लाग्दैन ।’एक-दुई दिन पो ड’र लाग्ला । सँधै ड’राएरै बस्न पनि त भएन,’ उनले भनिन्, ‘म यहाँ बाट खसेर बाँचेकी छु, अब मैले यहीँ काम पाउनुपर्छ ।’
‘भोली हुने धरहराको उ’द्घाटनमा ‘आउनुपर्छ है’ भनेर पुनर्निमाण प्राधिकरणबाट उनलाई फोन आएको छ । निम्तो कार्ड पनि आउने बताइएको भए पनि उनले पाए की छैनन् । खोइ जाऊँ कि नजाऊँ,’ उनले अन्योल मुद्रा मा भनिन् ।’नेपाल प्रेस बाट।
‘भिडियो सामाग्री हेर्नुस।